TTSweet: ကမ္ဘာပျက်မဲ့နေ့ ...
Posted by T T Sweet at 9:00 AM
ko9December 9, 2012 at 11:50 AM
Good husband.... Able to make wife happy :)
ဇွန်မိုးစက် December 9, 2012 at 2:30 PM
အစ်မရေးထားတာ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ၊ ဟုတ်တယ်နော်... ၂၁ရက်နေ့မှာ မမတို့က လေယာဉ်ပျံကြီးပေါ်မှာဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုခုဖြစ်ရင်တောင် ဘေးကင်းရန်ကင်းရှိနေတာပေါ့။ :D
အာ.ဆိုလဲ တရုတ်ပြည်နားက နေရာကိုသာ မောင်းခိုင်းလိုက်တော. အမရေ
ဘယ်နေရာလဲ သေချာမှတ်သွားဦး လေယဉ်မှူးကြီးကို ပြောရအောင်
Evy December 9, 2012 at 6:00 PM
တီဆွိနဲ့ ကြောက်တတ်တာခြင်း တော်တော်တူတယ် သိလား။ လေယာဉ်စီးရမယ်ဆိုရင် မျက်စေ့ပျက်မျက်နှာပျက်ပဲ။ အဲဒီနေ့ကျရင် စင်္ကာပူကို ငုံကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့ဦးတော် တီဆွိ၊ ရှိမှရှိသေးရဲ့လားလို့လေ :D :D
ဟမ်မလေး တီဆွီရယ် ရယ်ရတာ ရှူးရှူးတွေတောင်ထွက်တယ် ခွေဖြူလဲ လေယဉ်လက်မတ် ပြေးဝယ်လိုက်အုန်းမယ် အဟီး
သက်ဝေ December 9, 2012 at 11:32 PM
ဘုရား ဘုရား တူလိုက်တာ... တူလိုက်တာ.. လေယာဉ်ပျံစီးတိုင်း လေယာဉ်ဦးမော့ပြီး တက်သွားတာကို ကြိုက်သလောက် ကြောက်တာလည်း အရမ်းပဲ ဒီလောက် လေးလံ ၀တုတ်တဲ့ ကိုယ်ထည်ကြီး လေထဲမှာ အမြင့်ကြီးမှာ ပျံနေတာ တွေးမိတိုင်း တကယ်ကြောက်တယ်... တီဆွိပြောသလိုပဲ ၂၁ ရက်နေ့ လေပျံပေါ်သွားနေရင် လွတ်မယ် ထင်တယ်လို့ အိမ်မှာ ပြောလိုက်တယ်... ထုံးစံအတိုင်း ရယ်နေပြန်တယ်.... :D :D :D
T T Sweet December 10, 2012 at 4:38 PM
တီဆွိဆို တော့ အန်တီသက်ဝေမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ဘလော့ဂ်ကို နှိပ်ကြည့်ရသေးတယ်။ ကိုယ်လို ဘ၀တူချင်းဆိုတာ သိရတော့ ၀မ်းသာလိုက်တာ။ ၂၁ ရက်နေ့ လက်မှတ်ဝယ်ထားနော်။ ကိုကြီး ကိုကြီးကို ရယ်မနေနဲ့ ...ရယ်မနေနဲ့ ဒါဟာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်လို့ ပြန်ပြောလိုက် ...
သက်ဝေ December 12, 2012 at 12:11 AM
ဟား ဟား ဟား... အဲဒီအတိုင်း သံစဉ်လေးနဲ့ ပြောလိုက်မယ် ပြောလိုက်မယ်...
AMK December 9, 2012 at 11:40 PM
တီဆွိ ရဲ့ဦးခြိမ့် က idea အတော်ကောင်းတယ် ..သူများတွေ ဆို လက်မှတ် တင် Millions ရဲ့ ချီပြီးပေးရတာ.
အော်ရယ်မိတယ် တီတီဆွိရေ။ လေယာဉ်တောင်ပံကို မြင်ရတဲ့ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်တိုင်း တီတီဆွိတွေးသလို တွေးမိတယ်။ ဦးခြိမ့်ကတော့ အကြံပိုင်သဗျာ.......
T T Sweet December 10, 2012 at 4:35 PM
ကိုယ်လို လူမျိုး ရှိသေးသကိုး ...ခုတော့ လေယာဉ်တောင်ပံဘေးထိုင်မိလဲ ဘယ်တော့မှ မကြည့်တော့ဘူး။
ညီမလည်း ၂၁ ရက်နေ့ ကို စကာင်္ပူကနေ မြန်မာပြည်ပြန်မှာ အညာထိပြန်မယ် တီဆွိကို တွေ့ ဖူးချင်ပါတယ်..
တီဆွိမအားတောင် ဖုန်းလေးတော့ ဆက်ချင်တယ်..
တီဆွိ တို့ က ဘယ်နှစ်ပတ်လောက်နေမှာလဲ
T T Sweet December 10, 2012 at 4:33 PM
အန်တီဆွိတို့ ၈ရက်နေ့မှ ပြန်မှာပါ။ ၂၃ ကနေ ၂၈ ထိက နယ်ဖက်က အမျိုးတွေဆီသွားကြမှာ။ sweetee2008@gmail.com ကို email ပို့လိုက်ပါနော်။
သစ်သစ် December 10, 2012 at 3:42 PM
လိန်ပျံဆင်းမယ်ကြည့်လိုက်တော့ ကမ္ဘာပျက်ထားလို့လေယာဉ်ကွင်းမရှိရင် တီဆွိတော့ခက်ဦးမယ်နော် (လေယာဉ်ဆီကလည်း ကုန်ခါနီးပေါ့ တီဆွိရာ...) ...အဟိ
T T Sweet December 10, 2012 at 4:31 PM
အဟမ်း ... ခုပဲ လေယာဉ်မှူးဆီ ဖုန်းဆက်မလို့ ... တရုတ်ထိသွားလို့ရအောင် လေယာဉ်ဆီများများ ထည့်ခဲ့ပါလို့ ... များတို့ luggage လျှော့ယူခဲပါမယ်လို့ ... ... (ကဲ ဘာတတ်နိူင်သေးလဲ ... အန်တီဆွိ၏ ညစ်စုတ်စုတ် မျက်နှာပေးမြင်ယောင်ပါ ...)
သစ်သစ် December 10, 2012 at 4:41 PM
T T Sweet December 10, 2012 at 7:08 PM
mstint has leftanew comment on your post "ကမ္ဘာပျက်မဲ့နေ့ ...":
လေယာဉ်စီးရတာကို ကြောက်တတ်တဲ့ ဆွိတီရဲ့ပို့စ်ကိုဖတ်ရင်း ထပ်တူညီတဲ့ အိမ်ဦးသခင်ကိုသတိရသွားတယ်း)
တီတင့်တော့ သေရွာပြန်ခဲ့သူဖြစ်လို့လားမသိဘူး သေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ရင် တုန်လှုပ်မှုအားနည်းသွားပြီ။
ဆွိတီရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်ရတာ စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။
T T Sweet December 12, 2012 at 8:51 PM
maykyaw December 13, 2012 at 7:15 PM
Hi Dear ma sweety,
let meet at Yangon, we also going back (21/Dec/2012) .
see you soon with cupid friends at Yangon.
best wishes (Bala & Maykyaw)
maykyaw December 13, 2012 at 7:16 PM
maykyaw December 13, 2012 at 7:17 PM
T T Sweet December 17, 2012 at 1:28 PM
ရန်ကုန်မှာ ကျူးပစ်တွေနဲ့ ဆုံဦးမှာပါ။ ၃၀ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းဖြစ်မယ်။ မေကျော်တို့လဲ အဲဒီနေ့ အားရင်တော့ ဆုံကြတာပေါ့။ ပထမရက်တွေက နယ်ဖက်တက်စရာရှိလို့ ၂၉ရက်နေ့မှ ပြန်လာမှာမှို့ပါ။ pm နဲ့ ဖုံးနံပတ်ဆက်စရာရှိရင် ပေးထားပါလား။ pm ပို့လိုက်မယ်နော်။
ဖိုးတုတ် December 25, 2012 at 2:23 PM
လေယာဉ်စီးပြီး turbulence ကိုကြောက်တတ်ရင် ကပ္ပတိန် lim ရေးတဲ့ အောက်ပါလင့်ကိုဖတ်ဖူးမလားမသိဖူး၊ မဖတ်ဖူးရင် ဖတ်ကြည့်ပါ၊ စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းပါတယ်
San San Htun January 7, 2013 at 5:38 AM
ဟား..ဟား..ဦးခြိမ့် အဖြေကို သဘောကျသဗျားး..း)